ရောင်းချသူ: Naing Wa Than
ရောင်း / ဝယ် / လဲ / အပေါင် ( လိပ်စာ စံပြဈေး )
ါ ph 09777709322
စံပြဈေး မြောက်ဒဂုံ တောင်ဒဂုံ အရှေ့ဒဂုံ
ကျေးဇူးပြု၍ onlineပေါ်တွင် အချိန်ပြည့်မရှိပါသဖြင့် ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
I phone 6+ 64 zp/A အလုံးသန့်
ရောင်းဈေး 310000 ks.
Mi note3ram6/ 64 အလုံးသစ်တိုင်းသန့်
ဗူးပစ္စည်းစုံ အာမခံ 8 လလောက်ကျန်
Mi 5+ ram4/ 64 အလုံးအသစ်တိုင်းသန့်
ဗူးပစ္စည်းစုံ အာမခံ 11 လကျန်
ရောင်းဈေး 195000 ks.
huawei Nova 2i ram4/ 64 အလုံးအသစ်တိုင်းသန်
ဗူးပစ္စည်းစုံ အာမခံ ကျန်
ရောင်းဈေး 255000 ks.
OPPO neo7ram 1 / 16 အလုံးအသင့်တင့်သန့်
ရောင်းဈေး 75000 ks.